Digniinta calaamadda bahalka 666
Baybalku wuxuu ka digayaa calaamadan - markaa sidoo kale waa waajib Masiixi ah inaan saas yeelno. 195
Kumana badbaadi doontid sababtoo ah waxaad tahay Yuhuud muslim ah ama khaniis
Ha u ogolaan naftaada in lagu siri 71
Run ku saabsan FO Nilsson
Waraaqii Hore Baabtiisaha Bentakostiga 151 2
Ciise wuxuu la mid ahaa Ilaah, wuxuu noqday nin, wuxuu ku dhintay iskutallaabta Ilaahna wuu sarraysiiyay
Kitaabka Quduuska ah waa cad oo ku saabsan cidda Ciise yahay. 1
Daroogada dhijitaalka ah ee mobilada - si ula kac ah ayaa looga dhigay balwad
Waa waqtigii aan ka bilaabi lahayn naas-nuujinta nafteena, iyo caruurteena, taleefanka gacanta ee aadka u balwada leh. 18
Saddexdaasi waa mid
Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ahi waa mid. 11
Dembiiluhu wuxuu ku qeyliyay Allahu akbar markii uu mindiyey dadka Vetlanda
Oohinta dagaalka muslimiinta waxaa laga maqlay Vetlanda - Markhaati ayaa sidaas sheegaya 15
Weerar argagixiso oo ka dhacay 5 meelood oo ku yaal Vetlanda - 8 ayaa dhaawacmay
Eeg fiidiyowyo badan! Argagixisada ayaa ku weerartay shan meelood oo kala duwan oo ku yaal Vetlanda, 4 dhaawac culus ayaa soo gaarey. 0
Kanaalka TikTok Apg29.nu - Hadda in ka badan 22,000 oo raacsan
Kanaalka Christer Åberg wuxuu noqday mid guuleysta oo khadka tooska ah ka socda. 1
Maalinta Dembiyada Adduunka - ma jirtaa?
Ma jirtaa maalin fiiro gaar ah u leh dunuubta adduunka? 7
Vecka 16, fredag 23 april 2021 kl. 18:33